Yakakura hesera yeChina API 602 ndokugadzira Steel Globe Valve
Newsway Valve Company inyanzvi yekugadzira mavhavha eAPI 602 Yakagadzira Simbi Globe Valves, isu tinogona kuburitsa 40000 seti API 602 ndokugadzira Simbi Globe Valves pamwedzi. Newsway Valve ine muhombe muhombe wemavharuvhu anofambisa vatengi kuendesa chero nguva. Product Name: Ndokugadzira Steel Glob ...
Kuumbwa nzira uye kuita tsananguro vharuvhu chiputiriso
1. Graphite Kurongedza mhando tsananguro Kune matatu anotevera marudzi ezadza anowanzo shandiswa mumagetsi. Kurongedza kunoshandiswa muchirongwa ichi imhando imwechete-yekuvhura muMufananidzo 1 uye kurongedzwa kwakaita kunge ringi muMufananidzo 3. Mifananidzo chaiyo ndeiyi inotevera: Mufananidzo 1 Imwe-yekuvhura mhando kurongedza Fi ...
Kuchengetedza nzira yevhavha kurongedza: Iwo mafiroti eprojekiti iyi anonyanya kuve neanotevera maviri ekushandisa: PTFE uye yakapfava graphite. Kana yakachengetwa, yakasimbiswa muhomwe kana mubhokisi. Chengetedza zvakashongedzwa mudura rakaomeswa uye rine mweya, dzivisa chiedza chezuva Teerera kune mweya mukati mekugara-kwenguva yakareba, uye contr ...
Mune inoyerera irikuendesa system, vharafu chinhu chakakosha kudzora chikamu, icho chinonyanya kuve nemabasa ekugadzirisa, kusiyanisa, anti-backflow, kudimburwa, uye shunt. Iyo vharuvhu inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri uye ehurumende minda. Yakakwira tembiricha vharafu imhando inowanzo shandiswa mumagetsi. Yayo chaiyo ...
Iyo yemagetsi bhora vharuvhu ine chiito chekutenderera 90 degrees. Iyo jongwe muviri inzvimbo ine denderedzwa nepaburi kana chiteshi ichipfuura nepakati payo axis. Iyo vharuvhu yebhora inonyanya kushandiswa mupombi sevhavha yemagetsi kubhaiza, kugovera nekushandura mafambiro ekufamba kwepakati. Izvo ...
Newsway Valve kambani yakakwira tembiricha bhora vharuvhu isimbi simbi chivakwa, chisimbiso fomu isimbi kune simbi chisimbiso, simbi chisimbiso mhete kune simbi chisimbiso inogona kuchinjaniswa, isina simbi ndiro uye graphite rinoumbwa ndiro chisimbiso mhete kune simbi chisimbiso. Kuwedzera kune yemagetsi dhiraivha, iyo yakaoma-yakavharwa butterfl ...
Mumakota matatu ekutanga a2016, hupfumi hwenyika hwakaramba huchikura nekukurumidza, iine GDP yekukura chiyero che11.5%, izvo zvakapa musika wevharuvhu yebhora maitiro akanaka. Nekudaro, iyo mamiriro ekupisa kwehupfumi anoenderera, uye kune mamwe matambudziko akatanhamara anogona kuita kuti hupfumi huwedzere ...
Stainless Simbi 316 Bhora Valve kutenga mirayiridzo
Iyo Newsway Valve Kambani 316 isina simbi bhora vharuvhu ine maviri-chidimbu uye matatu-chidimbu vharuvhu muviri zvivakwa. Iyo yepakati flange inosunganidzwa nemabhaudhi uye chisimbiso chakagadzirwa neiniel-based alloy. Iko hakuna PTFE mabheyari pane epamusoro uye ezasi vharuvhu madzinde, ichideredza kukweshera uye yekuchengetedza basa opera ...
Flange Gate Valve Musika Trend
ne admin pane 21-04-17
Chirevo ichi chinonzi "Global Flange Gate Valve Market" ndechimwe chezvakanyanya kuwedzerwa uye zvakakosha kuwedzerwa kuNSW Research's musika yekutsvaga zvinyorwa. Inopa kutsvagisa uye kuongororwa kweakakosha maficha epasirese flanged gedhi vharafu musika. Muongorori wemusika uyo wro ...
API 602 GLOBE VALVE Newsway Valve Kambani API 602 mavhavha epasi ane matatu mabhoneti ekugadzira. Yekutanga ibhoti-yerudzi bhoneti, iyo inosunganidzwa ne concave uye convex maficha, uchishandisa isina simbi mabhandi uye inoshanduka graphite yemhepo ronda gaskets. Mhete yekubatanidza inogona zvakare kushandiswa sekudikanwa. Iyo ...
Isimbi Simbi Gedhi Valve Chikamu chekuvhura nekuvhara chevhavha isina simbi yesuwo gedhi ndiyo gedhi, uye mafambiro ekufambisa kwesuwo anoenderana nekutungamira kwemvura. Gedhi resimbi isina chinhu ine maviri ekuisa chisimbiso. Nzvimbo mbiri dzekuisa chisimbiso yemhando inonyanya kushandiswa ...
Tsananguro uye kuongororwa kwebhuku rinoyangarara bhora vharuvhu
Manual vharuvhu vharuvhu, shavishavi vharuvhu uye chivhariso vharafu ndivo chete mhando vharafu. Musiyano ndewekuti chikamu chekuvhara chevhavha yebhora ibhora, iro rinotenderera rakatenderedza pakati wepakati weiyo vharuvhu muviri kuti uwane kuvhura nekuvhara. Vharuvhu yebhora inonyanya kushandiswa kucheka, kugovera uye kuchinja ...
Large uwandu China API 602 ndokugadzira S ...
Maitiro ekuumba uye mashandiro ezvinhu ...
Maitiro ekusarudza vharuvhu zvinhu zviri pasi ...